Jooji Wicitaanka Suuqleyda Caajiska! | Martech Zone
Jooji Wicitaanka Suuqleyda Caajiska!
Khamiis, Maarso 17, 2011 Khamiista, Oktoobar 27, 2011 Douglas Karr
Toddobaadkan, waxaan aqriyay qoraal kale oo suuqleyda loogu yeeray "caajis". Had iyo jeer waxay umuuqataa inay tahay khubarada warshadaha aan suuq geyn karin ee jiidaneysa "caajiska" kicinta ugu dambeyntiina waa la ila helay. Nin dir email ah oo aan waligiis maamulin olole ugu yeeraya macmiilkiisa caajis. Wakiilka suuqgeynta mobilada oo ka hadlaya macaamiishooda ma isticmaalayaan codsigooda maxaa yeelay waa caajis. Nin ka mid ah warbaahinta bulshada oo ka hadlaya suuqleyda ma kormeerayaan ama ka jawaabayaan marka lagu sheego khadka tooska ah ee caajiska ah.
Marka… waqtiga mid ka mid ah hadaladayda.
Ahaanshaha blogger, aftahan, ama xitaa waxa loogu yeero "khabiir" - khabiir maado - waa fududahay. Waxaan ku dhaqaaqi doonnaa inaan socono oo aan farta ku fiiqno qof walba una sheegno waxa ay qaldan yihiin. Waa shaqo fudud… iyo shaqo aan runtii jeclahay. Haddii aad faham fiican ka haysatid warshadaha, waad caawin kartaa shirkado badan adigoon si qoto dheer u qodin. Laakiin marwalba way fududahay inaad u sheegto dadka waawayn waxa ay khaldamayaan marka aadan dhab ahaan masuuliyad ka saarnayn fulinta iyo la xisaabtanka si aad u hesho natiijooyinka.
Inaad shaqaale noqotid ma sahlana. Ahaanshada suuqleyda ayaa xitaa ka sii dhib badan. In kasta oo shaqooyinka badankood ay naftooda fududeeyeen sannadihii la soo dhaafay, haddana waxaan ku darnay qaddarro qosol badan oo kanaallo iyo dhexdhexaadiyayaal ah taarikada suuqyadeena. Hal mar, noqoshada waxay kaliya macnaheedu tahay in lagu tijaabiyo xayaysiis ama labo telefishanka, raadiyaha ama joornaalka.
Mar dambe… waxaan helnay dhexdhexaadiyaal aan la koobi karayn oo ku jira warbaahinta bulshada oo keliya - ha ka fikirin suuq-geynta dhaqanka iyo internetka. Heck, waxaan helnay sideed hababka suuq geynta kaliya taleefanka gacanta… SMS, MMS, IVR, Email, Mawduuca, Xayeysiinta Moobiilka, Codsiyada Moobaylka iyo Bluetooth.
Isla mar ahaantaana aan si xad dhaaf ah u kordhinay tirada dhexdhexaadiyeyaasha, hababka la socoshada iyo falanqaynta iyaga, iyo siyaabaha ku saabsan sida loo hagaajin karo loona horumarin karo mid kasta each iyo sidoo kale helitaanka mid dhexdhexaad ah oo kan kale quudiya, waan yaraynay ilaha gudaha ee suuqleydu sida caadiga ah horey u haysteen waagii hore.
Maanta, waxaan telefoonka kula xiriiray shirkad caalami ah oo saadka oo 4 bogag kala duwan ku leh 4 dal oo kala duwan iyo koox ka kooban 1… laftiisa. Waxaa la filayaa inuu sii wado inuu kobciyo goob kasta gobol ahaan uuna kobciyo suuqgeynta soo galaya - miisaaniyad la'aan iyo a la'aan nidaamka maareynta maaddada ee ku habboon raadinta-injineernimada.
Khubarada mowduuca ku xeel dheer ma lahan shirar, siyaasada xafiiska, dib u eegista, caqabadaha miisaaniyada, xadeynta tikniyoolajiyadda, kheyraadka oo yaraada, lakabyada maareynta, la'aanta kheyraadka tababarka, iyo jadwalka xaddidan ee lagu hor istaagayo horumarkooda sida suuqa oo kale. Marka xigta ee aad go'aansato inaad ugu yeerto suuqle caajis, qaado daqiiqado yar oo aad falanqeyso deegaankooda… ma ku guuleysan kartaa waxay heystaan?
Waxaan la shaqeeyaa shirkadaha qaar halkaasoo ay u baahan tahay bilo qorsheyn ah si aan wax yar uga beddelo dulucda websaydh… bilood! Waxayna ubaahantahay shirar aan lasoo koobi karin iyo lakabyo maareeyayaal aan waxbaran oo ubaahan qiimaynta iyo ansixinta nidaamka. Waxa qaar ka mid ah suuqleyda ay awoodaan inay ka jiitaan wax mucjiso ah ma ahan maalmahan marka la eego caqabadaha iyo ilaha dhaqaalaha.
Isu ururi qaar ka mid ah booqdayaasha cusub oo leh Tynt
Jesubi: Abuurista Baahida Fudud
Mar 17, 2011 at 11: 31 PM
Wadada loo maro Douglas. Dadka badankood ma ogaadaan mas'uuliyadda weyn ee suuqa. Runtii anigu ma ihi suuqley. Laakiin runtii waan ku qanacsanahay waxa uu ku haysto shirkadeena. Suulka adiga
Mar 22, 2011 at 12: 27 PM
Runtii way adagtahay inaad suuq noqotid.